बिरालोले बाटो काटेर के साइत बिग्रेला र ? के-के भए साइत बिग्रेको मानिन्छ ! – Kendra Khabar
२०७५, ५ माघ शनिबार ०६:५५
“ए पख पख ! छेपारोले बाटो काट्यो !” तीर्थ गर्न भाडामा गाडी लिएर जाँदै गर्दा घरबाट केही पर पुगेपछि अचानक सानो बुबा बोल्न पुग्नुभएको थियो । सानो बुबाको आवाजले प्रकाश भाइले गाडी धिमे गतिमा ल्याए । तर, रोकिहालेनन् ।
यात्रा तय गर्ने थियो अनि प्रकाश अलि जोकोहीका कुरामा तुरन्त आइहाल्दैनथे । छरछिमेकी पाँच-सात जना मिलेर आन्तरिक पर्यटनमा निस्किएको सवारी अलि बिस्तारो हाँक्न थालिएको चैं पक्कै थियो । अतीत याक्तेन चलचित्रमा मात्रै होइन साँच्चै व्यवहारमा पनि अरुका अप्ठ्यारामा सघाउँछन् ।
कामका बेला थोरै बोल्छन् तर तौलेर । यात्रामा फ़र्साइलो रहने उनको बानी भने सबैलाई ज्यान थप्थ्यो यात्राको माहोलमा । उनको “जाऊँ-जाऊँ, छेपारोले बाटो काटेको त राम्रो पो भन्छन् त कतिपय सफल व्यक्तिहरू !” भन्ने भनाइले गाडी हुइँकिरह्यो हुइँकिरह्यो ।
गाडी केही मिटरमात्र अगाडि के बढेको थियो, पदम कराए : ए बाबु, रोक रोक । यो त नयाँ कुरो भयो ! एउटा बाँदरले बाटो काट्यो ! हेर्दै खलपत्रे छ ! लौ न नि ! अब के पो हुने हो ? माथ्लाघरे माइला बा यसैगरी भक्ति गर्न जाँदा बाँदरले बाटो छेकेर अरे चिप्लेर लडेछन्, पछि त्यही निहुँले ज्यान नै झिरिप भएछ !” फेरि याक्तेन बोले : “जाऊँ-जाऊँ, केही फरक पर्दैन ।
बाँदर न मान्छे, झण्डै उस्तै त हो नि ! होइन र ? पदम अङ्कल चैं भगवानको नाम लिनोस्, बरू चुप लागेर बस्नोस् अलि शुभ शुभ चिताएर ! अन्ट र सन्ट बोलेर पनि त काम छैन !” गाडी गन्तव्यतर्फ बढ्दै रह्यो । बाटो अलि पहाडिलो थियो र घुम्तिलो पनि । उकालो पनि उसैगरी बढ्दै थियो ।
एउटा भञ्ज्याङको दोश्रो घुम्ती कट्न नपाउँदै एउटा वनबिरालो बाटोमा बसिरहेको देखियो । “यो त बाघजस्तो छ, आवाज देऊ, बाबु !” सुनमाया काकी आफ्नै पारामा बोल्न पुग्नुभएथ्यो । प्रकाश बोल्न पुग्छन्, “बिरालो हो, हजुर, वनबिरालो ।
जङ्गलको छेउ छ पशुपन्छी कति थरी हुन्छन् सबै हेरेर के साध्य हुन्छ र !? फेरि यो त सेतो छ, सेतो बिरालो राम्रै मानिन्छ नि हैन र !” सोम्या मोबाइल निकालेर विडियो खिच्न थालिसकेकी थिई । “कति बलियो बिरालो हगि, प्रकाश दादा ! हेर्दा पनि चिल्लो, कस्तो सुन्दर !” मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै उसका हात यतिखेर काम्न थालेका थिए, “लु हेर्नु त, दादा, पर दुईटा बिराला बाटामुनि हामफाल्दै गए ! काला अँगारजस्तै पो थिए त ती । कस्तो डरलाग्ने ! एक छिन त रोक्ने पर्छ होला ।
अरु कोही कटेपछि हामी जाउँला !” “केही फरक पर्दैन, बुनु ! त्यसका आँखा टल्केको देखेर तिमी डराएकी हौ । त्यो एउटाले त मुसा पनि च्यापेको थियो नि ! त्यसरी मुसा चेपेका बिराला देखिनु त काम बन्ने संकेत पो हुन्छ त, यसो सन्दर्भ जोडेर व्याख्या गर्ने बानी गर्नुपर्छ क्या ! फेरि, ती बिराला दायाँबाट बायाँ न गएका हुन् ! बायाँबाट दायाँ हुँदै निख्खर काला बिरालाले बाटो काटे चैं कतिपय मानिस बार्छन् । त्यो पनि बेतुकको कुरो ! उनीहरू आफ्नो बाटोमा … हामी हाम्रै बाटोमा । बरू हाम्रा यस्ता झिनामसिना सोच र व्यवहार बुझ्नेभए उनीहरूले चैं हाम्रो उपस्थिति अशुभ मान्नेथिए होलान् ! हामी पनि त उनीहरूको बाटो काट्दै आएका छौं नि !” प्रकाशका कुराले एकैछिन सन्नाटा छाएथ्यो । जे भए पनि गाडी आफ्नै रफतारमा कुदिरहेको थियो आफ्नै बाटो लिंदै ।
करीब छ घण्टा जति व्यतीत भएपछि तीर्थ नजिक पुगेर होला फ़ाट्टफ़ुट्ट घरहरू पनि देखिन थाले । धारो पनि आयो । केही मान्छे रित्ता घैला र क्यानहरू लिएर बाटो काटेको देखियो । पदम अङ्कललाई के भन्नु न कसो भन्नु भैसकेको थियो । त्यत्तिकैमा एउटी चिटिक्क परेकी सुन्दरी युवती घैलाभरी पानी बोकेर आउँदै गरेकी भेटिइन् ।
अङ्कल हेर्नलायक दंग देखिनुहुन्थ्यो ! यतिखेर सबैले राम्रो साइतको सम्भावना बुझे र ढुक्क मनले यात्रारत रहे । यौटै कपाल नझरी भनौं बिना कुनै दोष उक्त तीर्थाटन सकिएको थियो अरे !
छु-मन्तर के हो ?
स्युत कटाउने वा छुत कटाउने अनि उल्टा कटाउने जे भने पनि कुआत्माले कुनै खराबी नगरोस् भनेर मनको मन्त्र पढेर आत्मविश्वाश जगाउने काम छु-मन्तर हो ।
यस्तो मन्त्र पढे पनि वा नपढे पनि खान लागेको वस्तु खानुभन्दा पहिले आफ्ना ईष्टदेव सम्झेर चढाएपछि वा अर्पण गरेपछि छुस्स अलिकति अन्तै पन्साउने चलन धेरै ठाउँमा देख्न बुझ्न सकिन्छ । कसैको टोपी वा अन्य कपडा लाउँदा र नयाँ कपडा आङ्गपरीक्षण गर्दा पनि थु-थु गर्ने चलन छ ।
यसको पछाडिको कारण पनि केही सर्ने वा गलत असर आइनलागोस् भन्ने नै हो । कोही सम्झेर गर्छन् कोही देखासिकीमा गर्छन् । बिरालोले बाटो काटेको देखे “हे भगवान” भन्ने, घाँटीजस्ता केही अङ्ग छोए औंला फुक्ने, अन्साइ-मन्साइ गरेको ध्वजा-दियो आदि (एक/दुई रुपैंया भेटे नटिप्ने प्राय मानिस ठुलो नोट वा बहुमुल्य सम्पत्ति भेटे केही सिमेभूमे पन्साको वा लास पूजामा चढाएको नठानी टिप्ने गरेका अवश्थामा बाहेक) सडकका छेउछाउ केही देखिहाले थु-थु गरेर अघि बढ्नेजस्ता विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने मानिसहरू प्रसस्तै भेटिन्छन् पनि ।
यहाँसम्म कि नराम्रो सोच पलाए वा त्रासदीपूर्ण सपना देखे त्यस्ता अवश्थाको निराकरणका लागि आची गरेको समयमा पुकार्ने र ‘सब ढुस भइजा’ भन्ने पनि हुन्छन् । मनको गिर्गिट्टी खेल्नेहरूका आआफ्नै तर्कना भनिसाध्य लाग्दैन पनि ! अझ कतिपय त गलत आत्माको शिकार नभइयोस् र मन नभाँडियोस् भनेर रक्षाकवच (रक्षामन्त्र लेखिएको कागज अनि जडीबुटी पोको पारेको धारण गर्ने वस्तु, जन्तर, बुटी, देवादिको सुक्ष्म प्रतीमा कुँदिएको बाला वा मन्त्रेको धागो आदि) वा ताबिज नै धारण गर्नेगर्दछन् । आ-आफ्ना धर्मसंस्कारमुताविक मन्त्रोच्चारण गर्ने र देव भाक्नेको जमात ठुलै रहेको बताइन्छ ।
साइत के हो ?
साइत समयको एक अंश हो । कुनै नयाँ काम शुरु गर्न अथवा विशेषत यात्रामा निस्कन अघि मनन र आँकलन गरिने समय तथा सन्दर्भको विन्दु साइत हो । मुहूर्त या लगन पनि भनिने यस्तो समयको अंश प्रायश उचित प्रकारको रहने विश्वाश गरिन्छ । खगोलज्योतिषको मान्यताअनुसार यस्तो समयखण्ड ग्रह या नक्षत्रको प्रभाव हेरी किटान गरिन्छ र कुनै काम गर्न/नगर्न उपयुक्त/अनुपयुक्त छुट्याइन्छ ।
आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार शुभ ठानिएको यस्तो समय शुभ साइत भएको मानिन्छ र यस्तो सुसाइतमा कुनै पनि कार्य जस्तै विवाह, ब्रतबन्ध, व्यवसायको थालनी, पढाइ, यात्रा, गृह प्रवेश, चलचित्र छायांकन इत्यादिको शुभारम्भ गर्नको लागि उपयुक्त हुने जनविश्वास साथै शास्त्रीय मत रहेको छ । जुरे जुराएको वा जोखाना हेरेर वा विशेष अध्ययन र अनुमान गरेर निर्धारण गरिने समयको यस्तो पाबन्दी एउटा विश्वाश हो र संस्कारको तौर पनि ! युवा विश्लेषक एबम् शिक्षाकर्मी केशव नेपालका अनुसार साइत ब्रह्मज्ञानको एक छनक दिने समयको खण्ड हो ।
उपनिषद् तथा हाम्रा ज्योतिष अनि होराजस्ता शास्त्रीय विज्ञानले निर्दिष्ट गर्ने समय र खगोलीय अवस्थितिको मिलन विन्दु साइत हो र उत्तम साइतमा जीवनका विविध कार्यहरू गर्ने बानी बसाल्नु राम्रो हुन्छ । जसरी एउटा पर्वतारोही चढ़ानमा जानअघि स्वास्थ्य जाँच गराउँछ, मौसम अनुकूल वा प्रतिकूल कसो छ हेर्छ र आवश्यक उपकरण र झिटिझाम्टासाहित लक्षतिर बढ्छ, त्यसरी नै जिन्दगीका कदमहरू चालिए नराम्रोभन्दा राम्रो नै हुने दृष्टान्तहरू धेरै छन् ।
यो वर्षका साइत कस्ता कस्ता छन् ?
चन्द्रशारिणी तथा हाम्रो पञ्चाङ्ग भनौं पात्रोले जनाएको धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले उत्तम मानिएका दिनहरू स्वत: शुभ साइतका मानिने ब्यवाहारपरक चलन रहिआएको पाइन्छ । विशेषगरी बुद्धपूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, उभौली तथा उधौली अनि श्रीपञ्चमीजस्ता दिनहरू स्वयम् साइत भैदिने र सोहीअनुसार गर्ने प्रचलन मौलिक मानिन्छ ।
चलन र मन शान्तिका लागि अनुशरण गरिने साइत व्याख्या र विश्लेषणका खुराक भने रहिआएकै हुन्छन् नै । विश्वाश र लोकाचारका प्रत्यार्थी यस्ता समय सोपानले जुनसुकै वर्ग र समुदायको भए पनि सभ्यताको द्योतकका रूपमा केही दिन वा समय खण्डलाई अलि विशिष्टीकृत गरेको हुने मान्ने गर्दछन् ।
वास्तुविद तथा ज्योतिषाचार्य महेन्द्र भण्डारीका अनुसार विक्रमको यो २०७५ सालमा विरोधिकृत् नामको संवत्सर परेको छ । राजा सूर्य र मन्त्री शनि भएको कारण द्वन्दात्मक अवश्था रहन्छ र राज्यलाई शुभ फल दिँदैन । उपद्रो तथा प्रकोपले तनाब बढ्ने छ । शनिदशाको प्रभावका हकमा यो वर्ष मकर राशिलाई वर्षभरी आद्यासाढेसाति शनि दशा छ ।
धनु राशिलाई वर्षभरी मध्य साढेसाति, वृश्चिक राशिलाई वर्षभरी अन्त्य साढेसाति अनि वृष र कन्या राशिलाई वर्षभरि अढैया शनि दशा छ । त्यस्तै गरी, यो वर्ष असार ८ र ३१ गते अनि माघ २७ र फागुन ९ गते ब्रतबन्धको विशेष मुहुर्त रहेको तथा बैशाख ५, ६, १६ र २८ गते, असार ६, ७, ९, ११, १५ र १६ गते, मंसिर २९ गते, माघ ३, ४, ८, ९, ११, १३, १४, १५, २६, २७ अनि फागुन १, २, ७, ८, ९, १०, १३, १४, २३, २४, २५, २८ २९ गते विवाहको लगन परेको छ । घरको जग राख्ने साइतका रूपमा भने वैशाख १४, १७ र १९ गते, साउन ४ र १४ गते, मंसिर २८ गते, पुस २ र ३० गते अनि फागुन ९ गतेलाई उपयुक्त मान्नसकिने छ ।
मत अभिमत जे भएपनि आफूलाई नराम्रो लाग्ने गरेका प्राय व्यक्ति वा वस्तु देखे-भेटे राम्रो हुँदाहुँदै पनि नराम्रो हुने वा उल्टो सोच्ने गरिएको पाइन्छ । राम्रो सोच्दा र गर्दा त नराम्रो हुने जमानामा सोझै नराम्रो कुराले दिमाग झुण्ड्याएर राख्नु त झन् कताको राम्रो होस् र !?
के-के भए साइत बिग्रेको मानिन्छ ?
रुखमा बसेका अथवा तारमा बसेका चराहरू जिस्कने स्वभावका पनि हुन्छन् ! तल कोही मान्छे वा गाईवस्तु आए पिचिक्क विश्ट्याउने गरेको भेटिन्छ ! हिंड्दा अनि काम गर्दा सावधानी अङ्गीकार गर्नुको सट्टा साइत सप्रे-बिग्रेको भन्नेहरूको कुरो बेग्लै हुनेगरेको पाइन्छ ! मत अभिमत जे भएपनि आफूलाई नराम्रो लाग्ने गरेका प्राय व्यक्ति वा वस्तु देखे-भेटे राम्रो हुँदाहुँदै पनि नराम्रो हुने वा उल्टो सोच्ने गरिएको पाइन्छ । राम्रो सोच्दा र गर्दा त नराम्रो हुने जमानामा सोझै नराम्रो कुराले दिमाग झुण्ड्याएर राख्नु त झन् कताको राम्रो होस् र !
केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना